मध्यभोटेकोशीको आईपीओ विक्री खुला, कति दिने आवेदन? - बैदेशिक पोष्ट
अशोज २०, २०७८ ०७;४१ बिहान प्रकाशित
काठमाडौं– मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले सर्बसाधारणलाई आज (बुधबार) देखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कसान (आईपीओ) बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले सर्बसाधारणलाई प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ९० करोड बराबरको ९० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो।
पछिल्लो समय सेयरमा आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। हाल सेयर निष्कासन गरेको कम्पनीको सेयरमा मागभन्दा पाँच गुणासम्म बढी आवेदन पर्न थालेको छ। हाल आवेदकलाई गोलाप्रथामार्फत सेयर वितरण गर्ने नियम अनुसार कम्पनीको सेयर करिब ९ लाख जनाले १० कित्ताका दरले पाउनेछन्। त्यसैले कम्पनीको सेयरमा १० कित्तामात्र आवेदन दिनु उचित देखिन्छ।
कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आयोजना प्रभावित र स्थानीयका लागि १ अर्ब ५० करोड बराबरको १ करोड ५० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको थियो। जसमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्र र जिल्लाका वासिन्दालाई ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो। अब ९० करोड बराबरको ९० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न लागेको हो।
कम्पनीको आईपीओमा असोज २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएएमई क्यापिटलले जनाएको छ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरे कार्तिक ३ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ।
कम्पनीको आईपीओमा इच्छुक लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि–आस्बा अनुमति लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आईपीओमा लगानी गर्न सकिनेछ।
कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयरएनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको जनाउँछ।
विदेश बाट पैसा पठाउदै हुनुहुन्छ? यस्तो छ आजको विनिमय दर [सूचीसहित]
कार्तिक ३, २०७८ ०७;४६ बिहान प्रकाशित
अशोज २२, २०७८ ०६;५२ बिहान प्रकाशित
अशोज २१, २०७८ १०;०३ बिहान प्रकाशित
अशोज २०, २०७८ ०७;०१ बिहान प्रकाशित
आज सुनको मूल्य तोलामा पाँच सयले बृद्धि
अशोज १९, २०७८ १३;४९ मध्यान्ह प्रकाशित